आइपीएलः बल्ल पाए सन्दीपले मौका, चम्किँएलान् आज? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः बल्ल पाए सन्दीपले मौका, चम्किँएलान् आज?
काठमाडौं, चैत १६ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्समा आवद्ध नेपाली लेग स्पिर सन्दीप लामिछानेले मौका पाएका छन् । सुरुवातका २ खेलमा बेन्चमा बेसेका सन्दीपले तेस्रो खेलमा भने अन्तिम ११ मौका पाएका हुन् ।
गत वर्ष आइपीएलमा उनले ३ खेलमा ५ विकेट लिदैं सबैको ध्यान आकर्षण गरेका थिए । आइपीएलपछि निकै व्यस्त रहेका सन्दीपले यो बिचमा विश्व क्रिकेटका चर्चित लिग खेलिसकेका छन् ।